Hoyga - Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada
ADRC waa meesha ugu horeysa ee lala aado su'aalahaaga gabow iyo naafonimo. Noo sheeg sheekadaada.
Waxaan halkan u nimid inaan xoojino oo aan kobcino nolosha dadka waaweyn, dadka waaweyn ee naafada ah iyo daryeelayaashooda.
ADRC waa xiran tahay oo cunnooyinka guriga lagu soo galo waa la joojiyay Isniinta, 7/4.
Kafeega Grounded sidoo kale waa xiran yahay Isniinta & Talaadada - waxaan rajeyneynaa inaan kuu adeegno Arbacada, 7/6 oo leh liis cusub oo dhan! Hayso fasax nabdoon oo caafimaad qaba usbuuca axada!
ADRC – Waa meel ubaxeed!
"Xooji oo kobciyo nolosha dadka waaweyn, dadka waaweyn ee naafada ah, iyo daryeelayaashooda."
Halkan ADRC, waxaan ku bixinaa u doodid, macluumaad, iyo marin u helida adeegyada iyo fursadaha taageera madax banaanida iyo doorashada shaqsiga ah. Haddi aad raadinayso caawimo helida adeegyo, aad hayso su'aalo ama walaac ku saabsan arimaha lacagta, raadinayso hagaajinta caafimaadkaaga, ama rabtid inaad la xidhiidho dadka kale ee bulshada, waanu ku daboolnay. ADRC waxaa ka go'an inay u noqoto meel nabdoon oo soo dhawayn leh qof walba oo bulshadeena ka mid ah, waanu kuu joognaa adiga!
Ma raadineysaa caawimaad iyo isku xirka adeegyada?
Waxaan rabnaa inaan caawinno! Maanta nala soo xidhiidh taleefoonka
(920) 448-4300 ama iimayl bc.adrc@browncountywi.gov.
Ma waxaad raadinaysaa meel aad ku joogto firfircoon oo aad bulshada kula dhaqanto?
Waxaan nahay meesha aad tagi lahayd! Eeg jadwalkayaga dhacdooyinka oo dhammaystiran oo ku biir madadaalo!
Dhacdooyinka & aqoon-is-weydaarsiyada
Ku biir kooxdayada halka aan aaminsanahay in kala duwanaanshuhu naga dhigayo mid sii xoogaysanaya! ADRC waxay qiimeysaa shakhsiyaadka leh khibrado iyo aragtiyo kala duwan, waa wada shaqayn diirada saara waxayna ka shaqeysaa dhisida xiriir xiriir la leh shuraakada bulshada iyo macaamiisha.
Caawinaada Cuntada Guriga lagu kariyo
Meel-dhiman. Mushahar: $ 12.94 / saac
Meel waqti buuxa ah. Mushaharka: $ 24.47/hr
Haddii aad tahay qof naafo ah oo aad u baahan tahay hoy wakhti kasta inta lagu jiro habka qorista ama shaqaalaynta, fadlan u sheeg Khayraadka Shaqaalaha ee Degmada Brown baahidaada. Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada ee Degmada Brown waa loo shaqeeyaha fursad loo siman yahay oo ka hoos shaqeeya qorshe hawleed sugan.
Caafimaadkaaga sii joog
Weydii I&A: Cabashada Guriga Kalkaaliyaha
Waxaa laga yaabaa 25, 2022 | blog, Housing
Su'aal: Hooyaday waxay ku jirtaa goob lagu xannaaneeyo. Waxaan leenahay xoogaa walaac ah oo ku saabsan daryeelkeeda waxaana kala hadalnay shaqaalaha halkan, laakiin ma aanan helin wax lagu qanco...
Waxyaabaha caanaha laga sameeyo waa qayb ka mid ah cunto dheellitiran. Dadka waaweyni waa inay higsadaan saddex qaado oo caano ah maalin kasta, oo ay ku jiraan caano, caano fadhi, iyo farmaajo. The...
Weydii I&A: Ma ka fekereysaa guuritaan?
Su'aal: Aniga iyo ninkeyga waxaan ka fekereynaa inaan iibino gurigeena oo aan u guurno guri kale. Waxaan xoogaa la dhibtooday dhammaan xulashooyinka halkaas ka jira...
Fasallada & Dhacdooyinka
Lasoco dhacdooyinkayaga casriga ah.
ADRC waxay bixisaa casharo iyo dhacdooyin badan oo kaladuwan. Fiiri jadwalkeena!
Ku raaxayso cunnooyinka weyn adoo taageeraya tabobar shaqo oo loogu talo galay dadka naafada ah.
Qof walba waa la soo dhaweynayaa. Da 'kasta. Dhamaan awoodaha.